Viva Air malitere ụzọ si Miami gaa Santa Marta, Colombia
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Viva Air malitere ụzọ si Miami gaa Santa Marta, Colombia
Ivagbọelu Viva Air nke nwere ọnụ ala dị ala mara ọkwa ụzọ mba ofesi ọhụrụ dị n'etiti Miami na Santa Marta, Colombia. Nke a ga-abụ ụzọ izizi izizi enyerela n’etiti obodo abụọ a. Tiketi dị ugbu a maka akwụkwọ, ụgbọ elu ndị mbụ na-apụ na Disemba 18, 2018.
“Anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa ụzọ ọhụrụ anyị na-aga mba ofesi Miami-Santa Marta-Miami. Felix Antelo, onye isi oche nke Viva Air kwuru na n'afọ mbụ anyị na-atụ anya iburu ihe karịrị puku ndị ahịa 31, na-enye ha ohere iji ụgbọ ala anyị gaa Colombia.
Viva Air ga-arụ ụgbọ elu 3 kwa izu n'etiti Miami na Santa Marta na Tuesday, Thursday, na Saturday na 10: 38am. Linegbọ elu ahụ enyela ụgbọ elu site na Miami gaa Medellin kemgbe Disemba 2015, na-ebu ihe karịrị ndị njem 150,000.
Site n'okporo ụzọ ọhụrụ a, Viva Air ga-ejikọ mpaghara ahụ ebe ọ ga-etinyekwu Colombia dị ka ebe ndị njem njem njem kachasị maka ndị njem US.
Hawaii Tourism Authority: Ndị ọbịa na-emefu ala tụnyere otu afọ gara aga